PRODUCTS | Ichibanoil
Premium Series ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
Brand New ကား၊ ကီလိုနည်းသောကားများနှင့် Turbo ပါသော အင်ဂျင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
စွမ်းအားမြင့် Low viscoelasticity special character ပါရှိသော အားဖြည့်ဆီ(၂ဆ)ကြောင့် အင်ဂျင်အတွင်းပုံမှန်အင်ဂျင်ဝိုင်မရောက်နိုင်သည့် သတ္ထုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပေါက်ငယ်လေးများကို ဖာထေးပြုပြင်၍ အင်ဂျင်၏စွမ်းအားအပြည့်အဝ ရစေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
အင်ဂျင်သိသာစွာကာကွယ်ပေး၍ အင်ဂျင်ကိုသက်တမ်းပြည့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အင်ဂျင်ဝိုင်ခမ်းခြောက်တတ်သောကားများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Engine Torque Power ကို သိသာစွာ ကောင်းမွန်စေပါသည်။
လောင်ကျွမ်းမှုမှ ထွက်ရှိသော အင်ဂျင်ဝိုင်ချေးများ ကပ်တွယ်မှုမရှိစေရန် နှင့် လောင်စာဆီစားနှုန်း အထူးသက်သာစေပါသည်။
အင်ဂျင်ကို နေ့စဉ်အသစ်ကဲ့သို့ မောင်းနှင်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ အင်ဂျင်ရပ်တန့်ထားသော်လည်း အင်ဂျင်အပေါ်ပိုင်းသတ္ထုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာချောဆီထိန်းသိမ်းထားမှုကြောင့် ကားစက်နှိုးတိုင်းအတွက် Dry Start မဖြစ်အောင် အထူးကာကွယ်ပေးသည်။
Benefits that can be brought by using Premium Series
As the additive oil has low viscoelasticity, special character, it can fill the small pores on the surface of the metal of an engine where engine oil could not be reached regularly and help the engine to run in full capacity.
As additive oil prevents engine from deterioration, engine can be used full long life. It is suitable those motor vehicles which easily dries up engine oil.
It can improve engine torque power. Engine oil residues resulted from combustion could be cleaned away and fuel consumption can be reduced.
It helps to run the engine as it isanew one.
Although the engine in left un used foralong time, the surface of the metal plate on the upper part of the engine would be in good condition as it Is protected by the Lubricant, hence, when vehicle is started it would not cause dry start.
It is most suitable for cars with high engine power.
Power Series ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
ထူးခြားသော SYNTHETIC အရည်အသွေးအမျိုးအစားဖြစ်၍စွမ်းအားမြင့်ဂျပန်အင်ဂျင်ဝိုင်အားဖြည့်ဆီ (Active Power) ပါဝင်သောကြောင့် အခြားသောအင်ဂျင်ဝိုင်များထက်ကားစက်သံဆူညံခြင်းကို သိသာစွာလျော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်းကပ်ငြိနေသောကာဗွန်ချေးများကိုလျော့ကျစေခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်းသန့်ရှင်းစေခြင်း၊အင်ဂျင်သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေခြင်းနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အင်ဂျင်၏မြင့်မားသောအပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီး စက်လည်ပတ်နှုန်းမြင့်မားမှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းပွန်းစားမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ရာနှုန်းပြည့် သာလွန်ထူးခြားသော Long Life Engine Oil အမျိုးအစားဖြစ်ခြင်းကြောင့် အင်ဂျင်အတွင်း ပုံမှန်အင်ဂျင်ဝိုင်မရောက်နိုင်သည့်သတ္ထုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်ငယ်လေးများထဲထိစိမ့်ဝင်ပျံနှံ့စေ ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာအင်ဂျင်ရပ်တန့်ထားသော်လည်းအင်ဂျင်အပေါ်ပိုင်းသတ္ထုမျက်နှာပြင်ပေါ် တွင် အချိန်ကြာချောဆီထိန်းသိမ်းထားမှုကြောင့် ကားစက်နှိုးတိုင်း DRY START မဖြစ်အောင် အထူးကာကွယ်ပေးသည်။
Advantages derived from using Power Series
As it has unique synthetic quality and it contains Japan additive oil Active power, it can reduce noise emits from the engine more than any other engine oils. If also reduce carbon residues that are stuck to the engine. It cleans inner part of the engine. It can keep engine's longevity and prevent from engine oil dryness.
As it can stand the heat of the engine caused by high speed running of the engine and can prevent friction cause within the engine.
As it isalong life engine oil with 100% unique quality, the oil can permeate through the pores of the metal plate of the engine. Although the vehicle in left unused foralong time, due to the maintenance of the lubrication on the metal plate the vehicle can be started without causing dry start.
Plus Series ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
Four Stroke ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်များအတွက် အဓိကပြုလုပ်ထားသော API အသိအမှတ်ပြု အထူး အရည်အသွေးမြင့် Synthetic Oil၏ ထူးခြားစွမ်းရည်များကြောင့် ယာဉ်မောင်းနှင်မှုကို အထူးကောင်းမွန်စေပြီး၊ အင်ဂျင်စက်သံကိုတည်ငြိမ်စေ ကာ အင်ဂျင်ကိုအထူးကောင်းမွန်စေပါသည်။
ပြည်တွင်းရာသီဥတုအပူချိန်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းကြောင့် ချောဆီပြတ်တောက်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ဝိုင် ခမ်းခြောက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ထူးခြားသောအင်ဂျင် Response ကို ရရှိနိုင်သောအင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ရာသီမရွေးသုံးစွဲရန်ကိုက်ညီပြီး ဆီစားနှုန်း လျော့ကျစေ၍ Friction မဖြစ်အောင် ပါးလွှာသောlinerအဖြစ်နှင့် သတ္ထုမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားတွင် ကြာရှည်စွာတည်ရှိနေသောကြောင့် ဆီခမ်းခြောက်မှုမဖြစ်ဘဲ Dry Strart ဖြစ်ပွားမှုကို သက်သာစေပါသည်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံးသာမန်ကားမှစ၍ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံးTruck Carအကြီးစားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ယန္တရားများအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Multi-grade Diesel Engine Oil ဖြစ်သောကြောင့် ဆီစားမှုနှုန်းကို သက်သာစေပြီး၊ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းသံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် အပြင်၊ အင်ဂျင်သက်တမ်းကိုလည်း ရှည်ကြာစေပါသည်။
Benefits derived from plus series
Special quality synthetic oil recognized by API is produced for use of four strokepetroleum engines, gives good effect to the vehicle drivers, If stabilises sound of engines and give positive impact on engines.
It has been giving the protection from lubricant cutting off, Engine Oil running out due to good condition with local Season's Temperature.
It isahigh efficienery engine oil and the engine gives good response. It can be used in all season reducing the consumption of oil prevent from causing friction by formingathin liner between the two metal surfaces. This thin liner can last foralong time without getting dry up and reduces causing dry start.
This synthetic oil can be used for ordinary diesel engine car, large truck cars and heavy, machinery used in construction.
As it isaMulti-grade diesel engine oil, It reduces oil consumption and prevents from rusting inner parts of the engines and increases engine life.